သက်တန့်ချို: အချစ်နှင့်သူ၏အကြောင်း (အပိုင်း၂)
ပန်းခင်းလေး May 29, 2010 at 10:31 AM
အပိုင်း(၃) မှာ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ ...
စောင့် မျှော်နေမယ်နော် . . .
စကားမဆက် ... ငြိမ်းငြိမ်းဆိုတော့ 
ညီမလေးနာမည်နဲ့ တူနေတယ် ... ခိခိ ;P
ရွှေရတုမှတ်တမ်း May 29, 2010 at 7:11 PM
ရှင်က ထွားတော့ ကျမလဲ လန့်သွားလို့ အဆက်အသွယ်မလုပ်ရဲတာထင်ပါရဲ့..
TYZ May 30, 2010 at 8:37 AM
ကိုသက်တန့်က ဖိနပ်ပြတ်တဲ့ဇာတ်လေးထွင်သကိုး ခံရတာပေါ့။ သံယောဇဉ် ၉ တုန်းကတော့ ဖိနပ်အဖွက်ခံရလို့ ခြေဗလာနဲ့ ပြန်ရသတဲ့.. သူရဲကောင်းက ကြောက်ချေးပါပြီး မထွက်ရဲဘူးလေ.... ခိခိ:P ပန်းခင်းလေးလို လိုက်ရယ်တာ.... ဆက်မဲ့အပိုင်းကို မျှော်နေပါတယ်။
အကြမ်းထည် May 30, 2010 at 10:22 PM
ရင် ခုန် သံ ချစ် ခြင်း အ စ ထို ဖိ နပ် ပြတ် တာ လေး က စ ခဲ့ တာ လား ဆရာ ရေ.....
ဆက် လက် ၍ နောက် ဇာတ် သိမ်းပိုင်း လေး များ အ ထိ ပျော် ရွှင် ချမ်း မြေ့ စွာ ရေး သား နိုင် ပါ စေ....
ဟုတ်ကဲ့ September 26, 2011 at 2:23 AM
အပိုင်း ၁ တို့ ဘာတို့က ဘယ်လိုရှာတာလဲ ဟင်
ဟုတ်ကဲ့ September 26, 2011 at 2:42 AM
အပိုင်းတွေက ဘယ် လိုရှာရတာလဲ ဟင်
How can i search?????
အကို့တင်တဲ့ စာတွေအားလုံးဖတ်ဖြစ်တယ်.ကျွန်တော်နှင့်ဟောက်ဆာဂျင်ဘ၀ ကိုပိုပြီး သဘောကျတယ်အကို........အားပေးလျက်ပါ